Ungazifunda njani iitshathi ze-Forex, isikhokelo sabaqalayo kwi-Candlestick, Line and Bar chart
Education - Amanqaku kunye tutorials - amanqaku asekelwe ngaphambili - Ungayifunda njani iitshathi ze-Forex
Itshati ye-Forex ichazwa njenge umfanekiso obonakalayo ixabiso lamaxabiso ezinto ezihlanganisiweyo ngexesha elithile.
Ibonisa umsebenzi wezinto zorhwebo ezenziwayo ukuya kwixesha lexesha elithile lokurhweba ngaphandle kokuba ixesha lemizuzu, iiyure, iintsuku okanye iiveki. Utshintsho lwamaxabiso lwenzeka ngexesha elingelolakho xa kungekho mntu unokulindela ngokuthe ngqo njengabarhwebi, kuya kufuneka sikwazi ukujongana nemingcipheko yorhwebo olunjalo kwaye senze amathuba kwaye oku kulapho uya kufuna uncedo lwetshathi.
Kulula kakhulu ukusebenzisa iitshathi njengoko unokwazi ukutshintsha kweenguqu kumaxabiso ngokuwajonga nje. Kwitshathi, uya kubona indlela eyahlukeneyo yokuhamba kwemali kwaye unokuqiniseka ukuba unomdla wokuya phezulu okanye wehla ngexesha elithile. Inxulumene nezibonda zimbini kunye i-eksisi ikwicala elime nkqo, kwaye imele umyinge wamaxabiso ngelixa ixesha iboniswa kwicala elifanelekileyo eliyi- x-axis.
Kwixa elidlulileyo, abantu bebesebenzisa izandla ukuzoba iitshathi kodwa kule mihla, kukho isoftware enokuthi iyelenqe kubo ukusuka ekhohlo uye ekunene Phesheya x-axis.
Isebenza njani itshathi yexabiso
Itshathi yexabiso libonisa iyantlukwano kwimfuno kunye noniko kwaye iyonke Intengiselwano yakho nganye ngamaxesha onke. Kukho izinto ezahlukeneyo oza kuzifumana kwitshathi kwaye oku kubandakanya iindaba zangomso kunye nolindelo olunokunceda abathengisi ukuba bahlengahlengise amaxabiso abo. Nangona kunjalo, iindaba zinokwahluka kwinto ezayo, kwaye ngeli xesha, abathengisi baya kwenza uhlengahlengiso ngakumbi kwaye batshintshe amaxabiso abo. Oku kuyaqhubeka njengoko umjikelo uqhubeka.
Nokuba le misebenzi ivela kwii-algorithms ezininzi okanye ebantwini, itshathi idibanisa ezo zinto. Ngale ndlela uya kufumana ulwazi olwahlukileyo kwitshathi nokuba yeyokuthengisa ngaphandle, ibhanki ephakathi, i-AI, okanye abathengisi abathengisayo ngokubhekisele kwintengiselwano yabo.
Iindidi ezahlukeneyo zeetshathi ze-Forex
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeetshathi kwi-Forex kodwa ezona zisetyenzisiweyo nezaziwayo zi iitshathi zemigca, iitshathi zebar, yaye Iitshathi zetafile.
Itshati yomgca yeyona ilula kuzo zonke. Zoba umgca ukuze ujoyine amaxabiso okuvala kwaye ngale ndlela, ibonisa ukukhuphuka nokuwa kweemali ezibhangqileyo kunye nexesha. Nokuba kulula ukulandela, oko akuniki abathengisi ulwazi olwaneleyo ngokuziphatha kwamaxabiso. Uya kufumanisa kuphela emva kwethuba lokuba ixabiso liphelile kwi-X kwaye akukho nto ingaphezulu.
Nangona kunjalo, ikunceda ekuboneni ngokulula iindlela kunye nokwenza ukuthelekisa kunye namaxabiso okuvala kwamaxesha ahlukeneyo. Ngetshathi yomgca, unokufumana ukujonga ngokubanzi ngokuhamba kwamaxabiso njengakwi-EUR / USD Umzekelo apha ngezantsi.
Xa uthelekisa kwitshathi emgceni, iitshathi zebar ziyinkimbinkimbi nangona zidlula umgca ekunikezeleni ngeenkcukacha ezaneleyo. Iitshathi zebha zibonelela ngombono wokuvula, ukuvala, amaxabiso aphezulu kunye namaxabiso aphezulu ezibini. Emazantsi esiseko esime nkqo esimela udidi lworhwebo ngokubanzi kwisibini semali, uya kufumana elona xabiso liphantsi lokurhweba ngelo xesha ngelixa elona liphezulu liphezulu.
I-hash ethe tyaba ibonisa ixabiso lokuvula kwicala lasekhohlo kwitshathi kunye nexabiso lokuvala kwicala lasekunene.
Ngokunyuka okuguquguqukayo kwexabiso lokunyuka kwamaxabiso, imivalo iyanda ngelixa lehla xa amaqondo okuguquguquka esitsho. Olu tshintsho lubangelwa yipatheni yokwakha yebar.
Umzobo ongezantsi kwesibini sedola ye-EUR / ye-USD uza kukubonisa umzekeliso olungileyo wendlela ebonakala ngayo itshati.
Iitshathi zekhandlela zisebenzisa umgca othe nkqo ukubonisa iindawo zorhwebo eziphezulu ukuya ezantsi njengoko ezinye iitshathi ze-Forex zenza nazo. Kukho iibhloko ezininzi oza kuzifumana embindini ezibonisa iindawo zokuvula kunye nokuvala kwamaxabiso.
Ibala eliphakathi elinombala okanye ogcwele lithetha ukuba ixabiso lokuvala kwesibini elinemali lingaphantsi kunexabiso lokuvula. Kwelinye icala, xa ibhloko ephakathi inombala owahlukileyo okanye ingafakwanga, loo nto ivalwe ngexabiso eliphakamileyo kuneliyo ivulekileyo.
Indlela yokufunda Iikharityhulam zeekhandlela
Ukuze ufunde isicangca sekhandlela, kufuneka uqale uqonde ukuba liza ngeendlela ezimbini; umthengisi kunye nomthengi amakhandlela njengoko kubonwe ngezantsi.
Ezi fomu zimbini zamakhandlela zikunika njengomrhwebi ulwazi olubaluleke kakhulu. Oku kubandakanya:
Ikhandlela eliluhlaza elihlala limhlophe ngamanye amaxesha limela umthengi kwaye lichaza ukuba umthengi woyisa ngexesha elinikiweyo kuba inqanaba lentengo lokuvala liphezulu kunelo lokuvula.
Ikhandlela elibomvu elihlala elimnyama ngamanye amaxesha limele umthengisi kwaye lichaza ukuba umthengisi woyisa ngexesha elinikiweyo kuba inqanaba lentengo lokuvala langaphantsi kunelo lokuvula.
Amanqanaba exabiso eliphantsi neliphezulu acacisa ukuba elona xabiso lisezantsi kunye nelona xabiso liphezulu lifunyenwe ngexesha likhethiwe.
Ukuba awuzazi izinto ezenziwa ngu-Forex, kuya kufuneka wenze iimpazamo ezininzi kwaye inyathelo lokuqala lokuthintela ekunokwenzeka ukuba ukwazi ukufunda iitshathi. Zininzi iindidi zeetshathi ze-Forex kodwa ezi zintathu sizibalule apha zezona ziphezulu. Ungahamba naphi na apho uziva kufanelekile kuwe kwaye uqonde ukuba zisebenza njani iitshathi ngaphambi kokuntywila kwilizwe le-Forex.